ShweMinThar: August 2008
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ..... အခုချိန်မှာ ရာသီဥတုကတော့ net ကစားသမား
တွေအကြိုက်ပေါ့ ခင်ဗျာ ...
မီးက တဖွဲဖွဲ လာနေပါတယ် ခင်ဗျ ........ အခု publlic access centre က
data ကိုဒေါင့်ဖြတ်တင်တယ် ခင်ဗျ ...... မရဘူးခင်ဗျာ .. ဒိုင်လူကြီး
ကိုပုဂံ က အနီရောင် access denie ပြထားတယ် ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကြေညာနေစဉ် အတွင်းမှာပဲ data ကို tel exchange
မရပြန်ဘူးခင်ဗျာ ..... အွန်လိုင်: ups down တယ်တဲ့ခင်ဗျာ ..... data ဟာ
လိမ့်ကာလိမ့်ကာနဲ့ ပျက်သွားပြီ ခင်ဗျ
အခု ဂိုးသမား ကို administrator က ပိုက်ဘောမိထားတယ် ခင်ဗျာ ..... gtalk
ဟုတ်ကဲ့ အခု တဖတ်အသင်းက ကစားကွက်ကို ပြောင်းကစားမယ်. ပုံစံပဲခင်ဗျ
port forwording နဲ့ပြောင်းချိတ်တယ်ခင်ဗျာ .... ဒါပေမယ်.
အတွေ.အကြုံရင့်ကျတ်တဲ့ ဘတ်တန်းကစားတဲ့ epc က
မီးကို ဖြတ်ချတယ် ခင်ဗျာ ..... ဟုတ်ကဲ့ တကယ်.ကို အခတ်အခဲ ပါပဲခင်ဗျာ
ချစ်ခင်လေးစား ရပါသော netမြင်အသံမကြား သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူ အပေါင်:တို့
အခု ကျွန်တော်ကြေညာနေစဉ် အတွင်းမှာပဲ back bone ဒေါင်းသွာ:ပြီ
Posted by Alex Aung at 3:01 PM No comments:
အချစ်ဆိုတာ သူတစ်ပါးဆီက ယူတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီကအချစ်ကိုလည်းပြန်ပေးရတယ်။ များများလိုချင်ရင် များများပေးရတယ်။ ဒါကြောင့် တုံ့ပြန်မှုအရ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရတော့မယ်ဆိုရင် လည်း အတူတူပါပဲ။
အပူရှိန်ရှိတဲ့ နေရောင်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝံ့တဲ့အခါ အရိပ်ကသင့်နောက်မှာပဲ နေရတယ်။ အပူရှိန်ကို ရင်မဆိုင်ဝံ့လို့ ကျောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါထိုအရိပ်က သင့်ရှေ့ကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဝေဒနာနဲ့ နားကြည်းမှုတွေဟာ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ တေးသွားသံစဉ်များ ဖြစ်နိုင်သလို ခံစားချက်ပြည့်ဝသည့် ကဗျာတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအရာကို ခွန်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သူသာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
The opposite of Love isn't hate – its indifference. If you hate me that means you still care.
The firsts go away first love, first baby, first kiss. You have to create new ones.
SARAH JESSICA PARKER in "O" The Oprah Magazine.
Posted by Alex Aung at 5:22 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 8:49 PM No comments:
၀က်သား - ၃၀ကျပ်သား
ငရုတ်သီးအကြမ်းဖက် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ - ၂မြွှာ
ကြက်သွန်နီဥသေး - ၆လုံး
ယိုးဒယားငါးငံပြာရည် - သင့်တော်ရုံ
မန်းကျည်းသီးအနှစ်ရည် - ဟင်းစားဇွန်း ၄ဇွန်းခန့်
မြေအိုးဝက်သားမန်ကျည်းနှစ်ဟင်းချက်မည်ဆိုပါက ရှေးဦးစွာပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ချင်းများကို နုပ်နုပ်စဉ်းထားပါ။ ထိုပစ္စည်းများ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက ၀က်သားအား အရွယ်တော်အတုံးလေးများတုံးကာ နုပ်နုပ်စဉ်းထားသော အစာများ၊ ငရုပ်သီးအကြမ်းဖတ်၊ နနွင်း၊ ငံပြာရည်များနှင့် နှံ့စပ်အောင်နယ်ပြီး ခေတ္တနှပ်ထားပါ။ တစ်အောင့်ကြာလျှင်ချက်မည့်မြေအိုးထဲသို့ ရေသို့မဟုတ် ကြက်ပြုတ်ရည်နှင့် ၀က် သားနယ်ထားသည်များထည့်၍ ဆူအောင်တည်ပါ။ ရေဆူလာပါက မီးလျှော့ပြီး မီးအေးအေးဖြင့် တစ်နာရီခန့်ကြာအောင် ထပ်နှပ်ထားပါ။ ၀က် သားများနူး၍ ရေခန်းခါနီးအချိန်တွင်ဖျော်ထားသော မန်ကျည်းနှစ်များရော၍ ငါးမိနစ်ခန့် တည်ထားပါ။ ရေခန်း၍ခပ်ခြောက်ခြောက်အနေအထားရောက်လာပါက မီးဖိုပေါ်မှ ချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Posted by Alex Aung at 9:41 PM No comments:
လူငယ်သန်းပေါင်းများစွာ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
အမျိုးသမီး သန်း၂၀၀ခန့်သည် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ချင်ကြသော်လည်း ထိရောက်မှုရှိသည့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ သုံးစွဲခြင်းမရှိသည့်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးများ မရည်ရွယ်ဘဲကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သေဆုံးခြင်းစသည်တို့ကို တွေ့ကြုံနေကြရသည်။
လူဦးရေ ၅၇.၄သန်းရှိသည်။ ထိုလူဦးရေအနက် အသက်၁၅နှစ်မှ ၄၉နှစ်အရွယ်အတွင်းရှိသော သားသမီးမွေးဖွားနိုင်သည့် အမျိုးသမီး ဦးရေ ၁၄.၆သန်းရှိသည်။
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ လူတိုင်းရရှိစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာ တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူ UNFPA, WHO, UNDP, UNICEF, WFP နှင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်၊မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းစသည်တို့က ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်းပေါင်း၅ ထောင်ပြည့်သည့် ၁၉၈၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ဟု စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရိပ်ရိပ်အရှိန်ဖြင့်တိုးလာသော လူဦးရေနှင့် ထိုလူဦးရေကို ထမ်းပိုးထောက်ပံ့နိုင်မည့် ကမ္ဘာကြီး၏ အင်အားကိုချိန်ဆနိုင်စေရန် လူအများသိရှိလာစေရန် နိုင်ငံအသီးသီးမှ မိမိနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် သဟဇာတဖြစ်စေရန် ထိန်းညှိနိုင်မည့်အသိပညာ များရရှိလာ စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ကို ဘယ်တုန်းက စတင်ကျင်းပခဲ့သလဲ
၁၉၉၀ပြည့်နှစ်မှ စ၍ စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ ၁၉၉၇ခုနှစ်အထိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA) တို့ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ခုနှစ်မှစတင်ကာ လူဝင်မှုကြီးကျပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းကာ ကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ ဆောင်ပုဒ်
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်၄၀က ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၌ သားဆက်ခြားခြင်း၊ ကလေးအရေအတွက်ကန့်သတ်ယူခြင်းစသည်တို့ကို လွတ်လပ်စွာနှင့် တာဝန်ရှိစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်၄၀ကြာပြီးသည့်နောက် သားဆက်ခြားခြင်းနှင့် သန္ဓေတားနည်းများအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များသည် သန်းရာပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများနှင့် လူငယ်များလက်လှမ်းမှီ သိရှိကြခြင်းမရှိသေးသော အခြေအနေ၌သာဖြစ်နေပါသေးသည်။ ဆင်းရဲသောသူများအတွင်း၌ ထိုလိုအပ်ချက်ကိုမရရှိနိုင်မှုသည် ကြီးမားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုနှစ်ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ ဆောင်ပုဒ်ကို "It'saright, let's make it real" "မိသားစုဘ၀ သာယာရေး မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ပေး"ဟူ၍ ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။
လူတို့၏ မျိုးပွားအင်္ဂါစုနှင့် ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ပတ်သက်ပြီးရောဂါဘယကင်းရှင်းခြင်း၊ မသန်မစွမ်းဖြစ်မှုမှ ကင်းရှင်းခြင်းနှင့် ပြည့်စုံရုံသာမက ကာယသုခ၊စိတ္တသုခ၊လူမှုရေးသုခနှင့်ပါ ပြည့်စုံခြင်းကို မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဟုခေါ်သည်။
အသက်၁၀နှစ်မှ ၁၈နှစ်ထိကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဟုခေါ်ပြီး ၁၈နှစ်မှ ၂၄နှစ်ထိအရွယ်ကို လူငယ်ဟုခေါ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတို့၏အဟန့်အတားများအရ လူငယ်လူရွယ် များသည် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သည့် အသိပညာနှင့် အလေ့အထများကို ရရှိရန် ခဲယဉ်းပါသည်။
မလိုလားအပ်သော ကိုယ်ဝန်မရရှိစေရန် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော ကိုယ်ဝန်ကိုတားဆီးနိုင်ပါသည်။
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ဘယ်အချိန် သားသမီးယူမည်၊ ဘယ်နှယောက် ယူမည်၊ ဘယ်နှနှစ်ခြားမည်ကို တိုင်ပင်ပြီး သင့်လျော်သော သားဆက်ခြားနည်းကို ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမည်။
အမျိုးသားများအနေဖြင့် မိမိဇနီးသားဆက်ခြားနည်း အဆင်ပြေစွာ သုံးနိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဆေးခန်းသွား ရေးလာရေး စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါသည်။
မိမိဇနီးဆေးခန်းသို့ သားဆက်ခြားဆေးသွားထိုးနေစဉ် သို့မဟုတ် သားဆက်ခြားနည်းများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အာနိသင်ကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေစဉ်တွင် အိမ်အလုပ်ဝိုင်းကူလုပ်ခြင်း၊ ကလေးဝိုင်းထိန်းခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။
မိမိဇနီးသည် မည်သည့်သားဆက်ခြားနည်းလမ်းနှင့်မျှ မတည့်လျှင် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဖြင့် တာဝန်ယူနိုင်ပါသည်။
၂။ ဆာလာတယ်ထင်ရင် ထစားပါ။ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ရည်သို့မဟုတ် ရေထသောက်လိုက်ပါ။
၃။ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေရင်း ခေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ် ထင်ရင်ထ လမ်းလျှောက်ပါ။ ပေကပ် မထိုင်ပါနဲ့။ ဒါမှသွေးလည်ပတ်မှု ကောင်း သွားပြီး ခေါင်းမကိုက်အောင် ကာကွယ်ဟန့်တား နိုင်တယ်။
၄။ ခေါင်းကိုက်သက်သာအောင် ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး သို့မဟုတ် သကြားလုံးတစ်လုံး သို့မဟုတ် အမြှုပ်ထတဲ့ အချိုရည် တစ်ခွက (စပါကလင်) သောက်ကြည့်ပါ။
၅။ခေါင်းကိုက်တာ တစ်ပတ်မှာ ၂ရက် သို့မဟုတ် ၃ရက်ထက်ပိုလာပြီး စိပ်လာပြီဆိုရင် ဆေးမတိုးတော့ဘဲ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့တောင် ပိုဆိုးစေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် နားထင်ကြောလေးတွေမှာ ပရုပ်ဆီ လေးပွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိုးရိမ်သောကကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက် တာဆိုရင် သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။
Ref: GHK, Jan – 2007.
အလိုလို တစ်ကိုယ်လုံး သွေးခြည်ဥတာလား၊ထိမိခိုက်မိလို့ သွေးခြည်ဥတာလား ခွဲခြားတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ သူ့ဘာသာသူ အလိုလိုသွေးခြည်ဥတာများလာပြီး နေရာအနှံ့ဆိုရင်တော့ သွေးစစ်ဆေးပြီး သွေးရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်နှင့် ပြသဖို့လိုပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် သွေးခြည်ဥတာဆိုရင်တော့ (၁) ရေခဲတစ်တုံး ကို တဘက်နဲ့ထုတ်ပြီး သွေးခြည်ဥတဲ့နေရာပေါ် တင်ပေးခြင်းဖြင့် အရောင်အရမ်းလျှော့ကျပြီး နာကျင်မှု သက်သာစေတယ်။ သွေးခြည်ဥ တာလည်းသက်သာသွားမှာဖြစ်တယ်။ (၂) မြန်မြန်အနာ ကျက် သွေးခြည်ဥတာ ပျောက်စေဖို့ကတော့ နံနံပင်အရွက်အုံပြီး ပလာစတာနဲ့ ကပ်ထားပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နှလုံးနှိုးဆွစက် (Pace Maker)
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နှလုံးခုန်နေစေရန် နှလုံးကြွက်သားများအား ညှစ်ပေးပြီးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေဖို့ နှလုံး၏တစ်နေရာမှ နှိုးဆွပေးသည့် အချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှတ်ပေးနေရပါတယ်။ထိုနေရာက လှုံဆော်နှိုးဆွ မှုများသဘာဝအတိုင်းမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် နှလုံးခုန်လျှပ်စီး ကြောင်းရပ်သွားတဲ့ Heart Block ခေါ်ပြဿနာဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့နှလုံးပြဿနာရှိတဲ့ လူနာအားပြင်ပမှနေပြီး နှလုံးနှိုးဆွစက်(Pace Maker) လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို တပ်ဆင်ပေးရပါတယ်။
ဒါကြောင့်နှလုံးနှိုးဆွစက်ဆိုသည်မှာ နှလုံးကိုပုံမှန်အတိုင်းခုန်နေစေရန်၊ နှလုံးခုန်တဲ့နှုန်းကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြိမ်အတိုင်းခုန်နေစေရန် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောနှလုံးနှိုးဆွစက်တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း အတိုင်းအတိအကျခုန်ုစေရန်နှိုးဆွပေးနိုင်သလို၊ အချို့သောကိရိယာ တွေကျတော့ သတ်မှတ်ထား တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းအောက်လျော့ ကျသွား မှသာနှလုံးခုန်စေရန် နှိုးဆွပေးတဲ့ ကိရိယာလည်းရှိပါတယ်။ နှလုံးနှိုးဆွစက်ကို နှလုံးခုန်လျှပ်စီးကြောင်းရပ် Heart block နေတဲ့ လူနာရဲ့ အရေပြားအောက်မှာ မြှုပ်နှံပေးထားရပြီး အမြဲတမ်းတပ်ဆင် ထားရပါတယ်။